vezvematongerwo enyika vevasungwa archive - kodzero dzevanhu & mwenje art na ∴ PixelHELPER Foundation
vasungwa vezvematongerwe enyika
Ruregerero kuna Julian Assange! Isu tinoda ruregerero rwehumambo kuna Julian Assange!
Sticky post By Oliver Bienkowski On 18. January 2019
ruregerero rwehumambo kuna Julian Assange kubva kuna Mambokadzi
Kutenda ku #Wikileaks naStella Moris
Angela Merkel anoda hupoteri uye kuregererwa kubva kuna Julian Assange
Chiedza chinotaridza US Embassy Berlin
Usabvunze kuti nyika yako ingakuitire chii, taura zvaunogona kuitira Assange, iyo shanduko yedzidziso yaJohn F. Kennedy yenhoroondo yakavhenekera pamuzinda weUS muBerlin. MaAmerican anogara achipara mhosva dzehondo, kubva kuzvikanganiso muHondo yeVietnam iyo yakauraya mazana ezviuru zvevakabatwa kune vatapi venhau vakaurayiwa muhondo yeIraq, vanofanirwa kubvisa zvikumbiro zvavo zvekunze.
Gadzira chinyorwa chezuva rinotevera rekutongwa; 25.02. izuva rekutongwa rekubuda muUnited States.
Uye nekuti chokwadi chakavanzika kwenguva yakareba uye hapana hurumende inotora danho naJulian, Chirungu zvirokwazvo chichaiswa kumaAmericans. Ndosaka mwedzi uno tichizotanga kutaura nemamiriri eUS kunze kwenyika, iyo White House uye zvimwe zvivakwa zveUS kunze kwenyika nekuratidzira kwakajeka uye nekunyongana kwehunyanzvi.
Ipa ikozvino kuti izvi zviitike, ingave makumi matatu nemakumi matatu nematanhatu kana mashanu euros, zvidiki zvidiki zvinobatsira! Ita chimwe chinhu chemhando yeruzivo ramangwana, zvichibva pane zvaunofanirwa kuita sarudzo!
Mambokadzi anofanirwa kukanganwira Julian Assange
Kana kugashira & nekuparadzira zvakavanzika meseji ine huwandu hweveruzhinji inova mhosva, ndechipi chimwe chingave mushumo wepepanhau? Nekuti izvo zvinoratidzirwa uye chii chakavanzika zvinosarudzwa nehurumende.
Kushungurudzwa kwesimba reUSA pamusoro #Assange zvinoshamisa: Ari kurwara zvakaipisisa mutirongo yakanyanya yekuchengetedza, padyo nekufa. Ani naani anoponesa mushambadzi anochengetedza rusununguko! Snowden anoenderera zvakare kugara muMoscow nekuti nyika dzose dzekumadokero dzinotya kutsiva kwevaAmerican.
@Wikileaks anga ari muvengi weye US management kubva 2010. Isu tinoda kukurumidza kusunungurwa kubva #JulianAssange kubva pakusungwa kwake muLondon. Mambokadzi anofanira kubva amuregerera nekumupa hupoteri.
Chirevo chechiedza pamumiriri weUnited Kingdom
Kuratidzira kwechinyakare kwevamwe vasungwa vezvematongerwo enyika
Mvumo yekukumikidzwa kweEurope haifaniri kushandiswa kutsinhira vavengi vezvematongerwo enyika. Dare reGermany rine chikonzero chakanaka chekusatora Carles Puigdemont kuSpain. Mutemo wezvemurairo unowanikwa zvakare senzira yekurwisana kwemisha uye kutambudzwa kwevanopikisa mune zvematongerwe enyika nenzira yakaipa. Hurumende yeGermany haifaniri kutora rutivi mumakwikwi ezvematongerwe enyika muSpain uye kwete zvishoma, kubva pamatambudziko anhoroondo ezvakaitika mukupembedza kwemaonero ezvematongerwo enyika, hazvipi zvidziviriro. Kana iye zvakadaro achibvumirana nekudhindwa, kutora mutemo kwakazaruka uye chiCatalan chingazopedzisira chichikumbira kuDare reMitemo yeDare Repamusoro. Pakupedzisira ikoko, kodzero dzomunhu wacho dzinofanira kupiwa mberi pane mitambo yemasimba kuSpain.
→ 10 chiCatalan vezvematongerwe enyika vari mujeri
1. Jordi Cuixart - 161 mazuva mujeri
2. Jordi Sànchez - Mazuva 161 mujeri
3. Oriol Junqueras - 144 mazuva mujeri
4. Joaquim Forn - 144 mazuva mujeri
5. Dolors Bassa - Akabatwa kwechipiri kwemazuva 3
6. Raül Romeva - akaendeswa kujeri kwechipiri nguva ye3 mazuva
7. Jordi Turull - akaiswa mujeri kwechipiri mushure mezuva 3
8. Josep Rull - akaiswa mutorongo kwenguva yechipiri musati mazuva 3
9. Carme Forcadell - akaiswa mujeri mumazuva 3 apfuura
10. Carles Puigdemont - akasungwa mazuva matatu apfuura
→ Mukuwedzera, vezvematongerwe enyika vanotevera vari kutyisidzirwa nekuiswa mujeri uye iye zvino vari kugara muutapwa:
[gallery_bank type = "mifananidzo" fomati = "masonry" title = "yechokwadi" desc = "nhema" inopindura = "chokwadi" kuratidza = "yakasarudzwa" no_of_images = "17 ″ sort_by =" random "animation_effect =" bounce "album_title =" chokwadi "album_id =" 21 ″]
Tora kumanikidzwa & kutarisisa - titsigire izvozvi! Semubatsiri, urikuita mupiro unokosha mukumutsa kutsamwa kweruzhinji - kune nyika iri nani. Tora kongiri izvozvi uye ita kuti kuyambuka-muganho nyonganiso ibvire Hakuna kumwe kwaunowana kupandukira kwakanyanya uye kumukira kwese euro yakapihwa sesu. Ndokumbira kuti ushanyire webhusaiti yedu: PixelHELPER.org/Spenden kana kutsigira yedu Facebook fundraiser:
Dhinda munyori wemifananidzo: Dirk-Martin Heimzelmann
Mutambi wechiedza: Nhengo yePixelHELPER
Rusununguko rwe #Puigdemont rwakanyorwa mujeri reStasi muBerlin. Tiri kuratidzira tichipokana nekusungwa zvisiri pamutemo, # Stasi-kunge kusungwa kwevematongerwo enyika vechiCatalan kuSpain. Tinodaidzira kuti vasungwa vezvematongerwo enyika muSpain vasunungurwe. #PixelHELPER inoshevedza hurumende yemubatanidzwa kuti izivise nekukasira kuti Germany haibvumidze nezvematongerwo enyika kubvumidza kudzoserwa. Kubvumidzwa kwakadai kwezvematongerwo enyika kwechikumbiro cheSpanish chekubatsirana pamutemo zvinodiwa maererano nemitemo yeMutemo paInternational Mutual Legal Assistance - zvisinei nedare repamutemo redare. Zvichipa kukosha kwenyaya iyi, chinopa masimba ihurumende yemubatanidzwa muchimiro cheGurukota rezvemitemo, Katarina Barley. Tinoshevedza hurumende yemubatanidzwa kuti ione kuti Carles Puigdemont aburitswa nekukasira mutirongo kuGerman!
Tora kumanikidzwa & kutarisisa - titsigire izvozvi! Semubatsiri, urikuita mupiro unokosha mukumutsa kutsamwa kweruzhinji - kune nyika iri nani. Tora kongiri izvozvi uye ita kuti kuyambuka-muganho nyonganiso ibvire. Hakuna kumwe kwaunowana kupandukira kwakanyanya uye kumukira kwese euro yakapihwa sesu. Ndokumbira kuti ushanyire webhusaiti yedu: PixelHELPER.org/Spenden kana kutsigira yedu Facebook Fundraiser: https://www.facebook.com/donate/1972507843071293
IArab Spring yaifanira kuunza kukanganisa nekutanga nguva itsva yehurumende. Asi vapanduki vemazuva iwayo ikozvino vasungwa vezvematongerwe enyika. Vanhu vakaisa upenyu hwavo pangozi mune zvinyorwa zvakatsva paAmnesty International press freedom scale vari mujeri nhasi uye vakanganwa nenyika. PixelHELPER anoda kupindira pano uye kusunungura vasungwa vezvematongerwo enyika.
Chiito chedu chekutanga ndechokuti tidzokere kuvanhu chiedza 13 mujeri kubva muna March 2011. I "Bahrain 13" yakasungwa mushure mokunge mhirizhonga yaFebruary 2011 muManana, Bahrain, ichinzi inopikisa hurumende. Zvizhinji zvehurumende nemasangano, kusanganisira Amnesty International neHuman Rights Watch, inoramba ichitaura kukutambudzwa. Vasungwa vakanga vaoneka vachitambudzwa.
Zvinotambudzawo hazviregi kumhuri. Ava vasungwa vezvematongerwe enyika vachiri mujeri nhasi, kushumira mitsara ye5 kubva pakutongerwa upenyu kusvika kune mitozo yakawanda yehupenyu. Munhu wose ane kodzero yokuratidza maonero avo. Ngatirege kukanganwa vanhu vakanaka avo vakabayira rusununguko rwavo rwekuunza demokarasi uye rugare kune vazhinji.
Ruregerero kuna Julian Assange! Isu tinoda ruregerero rwehumambo kuna Julian Assange! Zvita 2nd, 2020Oliver Bienkowski